Soo-saareyaasha sunta cayayaanka ee Ruushku wuxuu labanlaabayaa Bangiga Dhulka - PotatoSystem
Jun 29, 01:29
Shirkadda Agoosto waxay ku talajirtaa inay ballaariso bankeeda dhulka u gaarka ah 250 oo hektar shan sano gudahood. Meelo cusub oo beeraha ah ayaa laga heli doonaa inta badan gobolka Volga. Waxaa loo malaynayaa in shirkadaha beeraha ee ay maamusho Agoosto-Agro, iyada oo ay ugu wacan tahay horumarinta mashruuca Agroproject, ayaa bilaabi doonta in ay dakhli ka soo saarto qaddarka ilaa nus dakhliga ka soo gala ganacsiga ugu weyn ee shirkadda Agoosto - horumarka, wax soo saarka iyo macluumaadka iyo taageerada tikniyoolajiyada adeegsiga alaabada ilaalinta dhirta. Iyada oo qayb ka ah istiraatiijiyaddan, sanadkii 2020 Agroproject wuxuu ku daray shirkadda beeraha ee Leninogorsk oo leh dhul beereed in ka badan 25 kun hektar oo ku yaal Jamhuuriyadda Tatarstan.
Sannadkan, shirkadda Agroproject ee bishii Agoosto waxaa ka mid ahaa shirkadda beeraha Leninogorsk ee Jamhuuriyadda Tatarstan oo leh dhul ka badan 25 kun oo hektar. Markii hore, waxay lahayd Tatagroleasing JSC. Bilowga sanadka 2020, Agoosto Agoosto waxa ku haystay dhul ka badan 70 kun oo hektar waxaana ku jiray 4 beerood: Agoosto-Muslum oo kuyaal Tatarstan, shirkada beeraha Sanary ee jamhuuriyada Chuvashia, shirkada Zarya ee degmada Tbilisi ee dhulka loo yaqaan Krasnodar Territory iyo Ak-Jer 2010 dalka Kazakhstan. Markii la iibsaday beero kale, wadarta guud ee deegaanka ayaa kordhay ku dhawaad ​​100 kun oo ha.
Aidar Galyautdinov, agaasimaha guud ee shirkadda maareynta Agoosto-Agro ayaa yidhi "Shirkad dhinaca beeraha ah oo ka hawlgasha gobolka Leninogorsk ayaa lasiiyay tixgelin. - Waxaan gaarnay heshiis bishii Febraayo waxaan isu diyaarineynaa in la xiro lix bilood gudahood. Mulkiilaha hore, oo hawshiisa ugu weyni tahay kireynta qalabka, shirkadda beeraha waxay ahayd hanti aan muhiim ahayn. Si kastaba ha noqotee, kani waa beero xoogaa cadaalad ah oo ku takhasusay beeraha caanaha iyo soosaarista miraha sonkorta. Waxaan dib u dhiseynaa mid ka mid ah labada beerood qeyb ka ah shirkadda beeraha iyadoo loo gudbayo caano-dabacsan oo aakhirkii aan cusbooneysiinno tirada lo'da: waxaan ugu horreyn tixgelinaynaa Holstein taranka iyo, suurtagal ahaan, funaanad. Halkii laga siin lahaa xididdada sonkorta, waxaan u wareegi doonnaa heerarkeena caadiga ah ee dalaga ee Tatarstan: ku dhawaad ​​10% aagga waxaa loo qoondeyn doonaa hadhuudhka cawska iyo cowska, inta soo hartay ayaa si siman loogu qaybin doonaa hadhuudhka iyo dalaga galleyda, kufsiga iyo gabbaldayaha. ”
Sida ku xusan Agroproject, Beeraha jira ayaa durba faa iido badan keena. Waxtarka shirkadihii beeraha ee bilaha Agoosto-Muslum iyo Ak-Jer 2010, oo qayb ka noqday Agroproject-kii intii u dhaxeysay 2017-2019, waxay la jaan qaadayaan qorshayaal shan sano ah oo ku soo laabashada maalgashiga. Sanad kasta, iyada oo loo marayo qaabdhismeedka Agroproject, qiyaastii 10% dhulka ka socda dhulka la heli karo waxaa la keenaa wareegga iyadoo ay ugu wacan tahay cawska duugoobay iyo dhulalkii burburay. Soosaarka dalaga ee beeraha waxaa iibsada ganacsatada, caanahana si toos ah ayey ugu galaan daacadaha.
"Hadafka ugu weyn ee Agroproject waa ganacsi, lacag helid," ayuu yiri Aidar Galyautdinov. - Intaa waxaa sii dheer, kaas oo sidoo kale ah mid aad u muhiim ah, Agroproject wuxuu kuu oggolaanayaa inaad muujiso awooda wax soo saarka Agoosto iyo tikniyoolajiyada ilaalinta dhirta kaliya maahan khibrad gaar ah, laakiin meelaha ballaaran. Hadafyadan ayaa runtii midba midka kale dhow isla markaana meelahaan ganacsi ay leeyihiin iskaashi wanaagsan. Muddo 4-5 sano gudahood ah, waxaan qorsheyneynaa inaanu ku ballaarinno banka dhulka 250 hektar, iyo sidoo kale inaan dhisno dhowr wiish oo dhismeyaal ah iyo ceelal caano leh. Sida ku xusan natiijooyinka hirgelinta mashruucan maalgashiga, dakhliga sanadlaha ah ee beerahayagu waa inuu noqdaa ugu yaraan 12 bilyan oo rubles - ilaa kala bar dakhliga keena ganacsiga aasaasiga ah ee Agoosto. ”
Helitaanka beeraha cusub waxaa badanaa la qorsheeyaa inta badan gobolka Volga, ee gobollada leh xaaladaha cimilada ugu wanaagsan ee beeraha. Isla mar ahaantaana, Agroproject wuxuu carrabka ku adkeeyay in u dhowaanshaha dhulka ilaa shirkada Agoosto-Alabuga ee dhulka SEZ “Alabuga” ee Jamhuuriyadda Tatarstan uusan ka ciyaarin door muhiim ah: aagagga waxaa loo tixgelin doonaa inay ku jiraan meelaha fog fog.
Waxyaabaha ay soo gudbisay adeegga saxaafadda ee shirkadda "Agoosto"
Tags: "Ogast"Qaadashada dhulka ee gobolka Volgaballaarinta bangiga dhulka
Dhoofinta alaabada ceeriin ee beeraha iyo cuntada laga keenay Ruushka 2001-2019, rajada laga qabo 2020
Kudar baradhada kaligaa ama iibsato: maxaa ka jaban Syktyvkar
2000 euro / ha dalaggii beeraha waa mid dhab ah. Koraaya baradhada istaarijka